Indawo yomlingo kunye nePhupha, emazantsi eMuñoz.
Rodeo Grande, Tucumán, Argentina
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMartin
Ikhabhinethi ibekwe eRodeo Grande, eTafi del Valle Indawo yomlingo emazantsi enduli iMuñoz kwindawo eziimitha ezingama-4,000, ejikelezwe ngamasimi elettuce, iitapile, umbona, iikhilomitha ezisi-7.8 ukusuka kwisikhululo senkonzo seYPF kwilali yaseMain.
Indawo ifikeleleka ngokulula ngendlela ephambili, iphakathi kwe-Ovejeria kunye ne-Estancia las Carreras indawo ekhethekileyo kunye nefanelekileyo yokuphumla.
Ikhabhinethi yethu ixhotyiselwe zonke iintlobo zeemfuno, ukuze ube nokuhlala ungalibalekiyo.
Yindlu enkulu yendlu enabo bonke ubutofotofo bokuhlala ngokukhululekileyo kwaye kumnandi. Inegrill kunye nediski, ilungele ukupheka kunye nokwabelana nosapho kunye nabahlobo.
I-hammock yaseParaguay kwigalari ibekwe ngokugqibeleleyo ukuze iphumle ngombono onelungelo. Yindawo enabo bonke itekhnoloji embindini weeNduli. I-Hydromassage yabantu ababini abanegumbi lokuhlambela le-en-suite kwigumbi elikhulu, i-Wifi, ii-TV ezi-2 ezihlakaniphile (i-HD epheleleyo), umatshini wokuhlamba, i-microwave, i-toaster, i-kettle yombane, ikhitshi ye-industrial, ifriji, i-pochoclera kunye ne-minibar kwigumbi elikhulu, kunye neendawo ezahlukeneyo. iintlobo impahla ukuba ukupheka.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-4, isofa ekwayibhedi eyi-1
Umlingo wale ndawo kukuba ibekwe emazantsi eCerro Muñoz eyona nto ibalulekileyo kwaye ibalulekileyo, phambi kweLos Pelados, enemilambo kunye nemisele ekufutshane eneendawo ezingaqhelekanga zokwenza iTrekkign kunye nokukhwela iHorseback kunye nemizuzu elishumi kuphela ukusuka edolophini, phakathi a uxolo epheleleyo. Ukuba kwimeko yonxunguphalo kumgama oziimitha ezingama-600 kuphela kwiziko likaxakeka lezonyango elineevenkile ezininzi ezincinci ezingaphantsi kweemitha ezingama-500.
Soy un tipo muy amable que le gusta conocer gente de diferentes partes del Mundo
Ukuqhagamshelana nomnini kuya kuba ngokuthe ngqo kwaye emva koko uya kubathumela kwisibini esithembekileyo esiye sanyamekela i-cabin yabo iminyaka engama-6, sibala kubo nantoni na abayidingayo.